"ဓားဝယ်သား ဂူလောင်း အမေစုကို ရှစ်ဟယ်" ~ Nge Naing
"ဓားဝယ်သား ဂူလောင်း အမေစုကို ရှစ်ဟယ်"
Monday, January 30, 2012 Nge Naing 18 comments
"ဓားဝယ်သား ဂူလောင်း အမေစုကို ရှစ်ဟယ်" တဲ့ အားလုံး နားလည်အောင် ဘာသာပြန်ပေးရရင် ဂူလောင်း ဆိုတာ အကုန်လုံးလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး ရှစ်ဟယ် ဆိုတာ ချစ်တယ် လို့ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင့် "ထားဝယ်သား အကုန်လုံး အမေစုကို ချစ်တယ်" လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA ဟာ ဗြိတိသျှလက်အောက်မှ မြန်မာပြည်ကို သိမ်းတော့ တနင်္သာရီတိုင်းကနေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပါတီစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကိုလည်း တနင်္သာရီတိုင်းကနေ စတင်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆိုရိုးစကားမှာ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာမယ် ဆိုတဲ့စကားပုံ ရှိသလို မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ပွဲဦးထွက်မှာ ကောင်းမှ စုတ်လာဘ်ကောင်းပြီး အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ အတိတ်နမိတ်ကိုလည်း ယုံကြည်မှု ရှိကြပါတယ်။ အခု စလိုက်တဲ့ ပွဲဦးထွက် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က တနင်္သာရီတိုင်းက စလိုက်တာ မှန်သွားပြီ (သစ်ထူးလွင်ဘလော့ဂ်) လို့ ပြောဆိုလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုတော့ ဘလော့ဂ်အသီးသီးက ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြထားတဲ့ အောက်ပါ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ခံစားနားလည်နိုင်မှာ အမှန်ပဲ။ တနင်္သာရီတိုင်းမှသည် မြန်မာတပြည်လုံးသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များ အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ပြီး အောင်ပန်းဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမနက် ၈-နာရီ ၀န်းကျင်းမှာ ထားဝယ်မြိုဆီ လေယဉ်နဲ့ရောက်ရှိလာပီး ထားဝယ်နဲ့ လောင်းလုံးမှာ ပါတီအစည်းတွေ။ လူထုဟောပြောပွဲေ တွ ဆက်လုပ်နေ တယ်လို့သိရပါတယ်။
တနသာင်္ရီတိုင်း ဥက္ကဌ ဦးလှမင်းအပါဝင် ထားဝယ်။ လောင်းလုံး။ ရေဖြူ။ သရက်ချောင်းနဲ့ ပုလောမြို နယ် တွေကပါတီဝင်တွေ။ ဒေသခံလူထုတွေက လေယဉ်ကွင်းအထိ လာကြိုကြတယ်လို့ ပါတီဝင်လူငယ် တွေကပြောပါတယ်။
လေယဉ်ကွင်းကနေ ထားဝယ်မြိုနယ်ရုံးဆီဝင်ပီး အဲဒီမှာ ပါတီဝင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာ။ လူထုကို နှုတ်ဆက် တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ၉-နာရီကျော်ကျော်မှာတော့ ထားဝယ်ကနေ ကမြောကင်းတံတား ကိုဖြတ်ပီး လောင်းလုံးမြိုနယ်ဆီခရီးထွက်ခဲ့ကြောင်း။ လောင်းလုံးမြိုနယ် ပါတီရုံးခန်းရှေ့ကနေ လူထုကို စကားပြောခဲ့ကြောင်း။ အဲဒီနောက် အောက်ရေဖြူရွာကို ဆက်ဆင်းပီး အဲဒီမှာလဲ လူထုဟောပြောပွဲတခု ထပ်လုပ်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။
၁၂-နာရီကျော်ကျော်ခန့်မှာတော့ အောက်ရေဖြူကနေ လာလမ်းအတိုင်းပြန်လှည့်ပီး ကမြောကင်းတံတား အလွန် သောကြာပြင်ဈေးမှာခရပ်။ ပီးတော့ မောင်းမကန်ကမ်းခြေကို ဆက်သွားပီး အဲဒီမှာ လူထုဟော ပြောပွဲတခုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပါတီဝင်လူငယ်တွေကပြောပါတယ်။
မောင်းမကန်ကအပြန်မှာတော့ ထားဝယ်မြိုဆီဝင်ပြီး လေယဉ်ကွင်းအသွားလမ်းပေါ်ရှိ တော်ဝင် စတိုးပေါ်က နေ ထားဝယ်လူထုကို စကားပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ၄-နာရီကျော်ကျော်မှာတော့ ထားဝယ်ဒေသခရီးစဉ်ပီးဆုံးလို့ ရန်ကုန်မြိုဆီ လေယဉ်နဲ့ပြန်သွားပီလို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
ပုလော။ သရက်ချောင်း။ ရေဖြူနဲ့လောင်းလုံးမြိုနယ်တွေမှ ပါတီဝင်များရဲ့ကြိုဆိုမှု
လောင်းလုံးမြိုနယ် အမတ်လောင်း ဦးအောင်စိုး
ထားဝယ်မှ မထွက်ခွါခင် ထားဝယ်လူထုအား တော်ဝင်စတိုးပေါ်ကနေ မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထားဝယ် ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေသခံ သိန်းချီ ကြိုဆိုခဲ့သည်။ ချစ်ရမည့်သူ ငတ်နေသော လူထုအတွက် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း အကြီးမားဆုံး လူထု စုစည်းမှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံတို့က ဆိုကြသည်။ အချို့က မျက်ရည်လည်သည်။ မချိတင်ကဲ ရေရွတ်သည်။ ထားဝယ်၊ လောင်းလုံ၊ မောင်းမကန် လမ်းတလျှောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခြွေခဲ့သော ပြောစကား ကောက်နှုတ်ချက်များကို ကောက်နှုတ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
(နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်၊ ထားဝယ်NLD ရုံး)" ပြည်သူလူထုကို ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို နောက်တစ်ခါ မဲမပေးနဲ့။ ကျွန်မတို့ NLD က လည်း ထပ်ပြီး ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး "
" တနင်္သာရီက ပြည်သူတွေရဲ့ သတ္တိပြောင်မြောက်တဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုကို ကြည့်ပြီး တခြားနေရာတွေ ကလည်း ထောက်ခံကြမယ် "
" ကျွန်မတို့ဟာ မှော်ဆရာလည်း မဟုတ်တော့ အုံဖွ အားလုံးဖြစ်စေ ဆိုပြီး မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကတိပေးနိုင်တာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ပြည်သူတွေကို ဘယ်တော့မှညာမှာ မဟုတ်ဘူး "
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ထားဝယ်မြို့သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရောက်ရှိသွားသည်။ ယခု ခရီးစဉ်သည် နေ့ချင်းပြန်ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးခရီးဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံများ - Yangon Press International နှင့် Getty Images)
ဒီပို့စ်မှာ ကူးယူဖေါ်ပြခွင့်ရတဲ့ ဘလော့ဂါများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု အောင်မြင်ပါစေ...
January 30, 2012 at 7:07 AM Reply
ခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပြီး ((ခင်ညွန့် ခံစား သိမြင်နိုင်ပါစေ)) post ကို လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ )
post ရော၊ post အောက်က comments တွေ၊ စာညွန့်တွေ ရော မြန်မာပြည်သူ အားလုံး သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေပါ။
ခင်ညွန့်အကြောင်း သမိုင်းမှန် အချက်အလက်တွေချည်းပါပဲ။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထားဝယ်လူထုက အားတက်သရော ကြိုဆိုပုံကို ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ မြင်ရတာ အရမ်း ဝမ်းသာအားရ ပီတိဖြာမိပါတယ်။ ဒီပုံတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တင်ပေးတဲ့ မငယ်နိုင် အပါအဝင် ဘလော့ဂါတွေ၊ FB က မိတ်ဆွေတွေကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ Internet မှာ တက်လာတဲ့ ၂၉-၁-၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထားဝယ်ခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရင်း Hot News Journal က ဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်သတိရတယ်။
ဒါနဲ့ ((ခင်ညွန့် ခံစား သိမြင်နိုင်ပါစေ)) post နဲ့ post အောက်က comments တွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ စာညွန့်တွေ ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်မိတယ်။
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာဖတ်သူတွေ အလွယ်တကူ ဖတ်လို့ ရအောင် ((ခင်ညွန့် ခံစား သိမြင်နိုင်ပါစေ)) post ရဲ့ link ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
January 30, 2012 at 7:24 AM Reply
"ခင်ညွန့် ခံစား သိမြင်နိုင်ပါစေ" post ရော၊ post အောက်က comments တွေရော မြန်မာတိုင်း လေ့လာပြီး ပေါ့ပျက်ပျက် သဘောမထားဘဲ အလေးအနက် မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။
အဲဒီ မြေခွေး ခင်ညွန့် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ အချက်အလက်တွေဟာ ပြည်သူအားလုံး သိသင့်တဲ့ ယုတ်မာ ကောက်ကျစ် ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းတဲ့ ခင်ညွန့် ရဲ့ အကြောင်း အတိုချုပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူး ခင်ညွန့်ရဲ့ အယုတ်တမာ လုပ်ရပ်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့ပစ်လိုက်တဲ့ လူတွေ ရှိနေပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ စစ်အုပ်စု နဲ့ ခင်ညွန့်ရဲ့ ဒလံတွေက မမှန်မကန် ဝါဒဖြန့်နေတာတွေ ရှိနေပါတယ်။
သမိုင်းတရားခံ ခင်ညွန့် ကို သမိုင်းတရားခံလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ခင်ညွန့်ရဲ့ ဒလံတွေက မမှန်မကန် ဝါဒဖြန့်နေတာကို ပြည်သူတွေ နားမယောင်သွားအောင်လို့ ဒါကို အလေးအနက်ထားပြီး ပြောရတာပါ။
နွေမှာ ငုနဲ့ပိတောက် လှိုင်သည်....April မှာ မေစုရဲ့ ခွပ်ဒေါင်းနိုင်မည်.
ပြည်သူများ သတိရှိကြပါ says:
အရေခြုံ စစ်အုပ်စုက ပြည်သူတွေကို အသွင်ပြောင်း စစ်ကျွန် ဆက်လုပ်သွားမလို့ အကွက်ဆင်နေတယ်။ ကြောင်သူတော် ခင်ညွန့်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တာ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်ဘူး။
ခင်ညွန့်က "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံပါတယ်" ဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေထဲကို ကိုယ်တိုင် ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ပြီး သပ်လျှိုပြီး ပြည်သူချင်း ရန်တိုက်ပေးမလို့ပါ။
အခုဆို ခင်ညွန့်ရဲ့ ဒလံတွေက "အတိတ်ကို တူးဆွမနေကြပါနဲ့တော့၊" "ဦးခင်ညွန့်ကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ၊" "ဦးခင်ညွန့်ဟာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သင့်တဲ့ လူတော်လူကောင်းပါ" ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေ ရေးပြီး ခင်ညွန့်ကို တကျော့ပြန် ပွဲထုတ်မလို့ ပြည်သူတွေကို နှပ်ကြောင်း ပေးနေတယ်။
အခုဆိုရင် ခင်ညွန့် အာဏာရှိစဉ်က ခင်ညွန့်က အာဏာကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ ပါမစ်တွေ ချပေးခဲ့လို့ အကြီးအကျယ် ချမ်းသာလာတဲ့ ခင်ရွှေက ခင်ညွန့်ကို တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးပြပြီး ခင်ညွန့်ကို စင်ပေါ် ပြန်တင်ဖို့ စပြီး လမ်းခင်းနေပါပြီ။
တကယ်က ခင်ညွန့်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အခုလောက် ဆိုးရွားသွားအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ အဓိက ပြည်ဖျက်တရားခံ နံပါတ် (၂) ဖြစ်ပါတယ်။
လူယုတ်မာ ခင်ညွန့်ဟာ သူတော်ကောင်းယောင် ဆောင်နေသူပါ။ အတွင်းစိတ် ကောက်တဲ့ အင်မတန် ကောက်ကျစ် ယုတ်မာ ရက်စက်တဲ့ လူယုတ်မာစစ်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်သူတော် ကြက်သူခိုး ဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ခဲ သန်းရွှေ ရက်စက် ယုတ်မာတာ လူသိများတယ်။ ကြောင်သူတော် ခင်ညွန့် ရက်စက် ယုတ်မာတာ လူ သိပ်မသိဘူး။
လူယုတ်မာ ခင်ညွန့် ရဲ့ ယုတ်မာ ကောက်ကျစ် ရက်စက်စွာ စနစ်တကျ နှိပ်စက်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူပေါင်းများစွာ သေသွားတာ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းသွားတာ၊ ရူးသွားတာတွေ အများကြီးပါ။
ဒါကြောင့် သမိုင်းတရားခံ ခင်ညွန့် ဟာ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံပါတယ်" ဆိုတဲ့ စကားတခွန်းထဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ကြားထဲမှာ ဝင်ပြီး ခြေထိုးမယ့် ဘေးရန်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကာကွယ်ဖို့ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ် ရှိတဲ့ ပြည်သူအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
January 30, 2012 at 9:07 AM Reply
ထားဝယ်ခရီးစဉ် အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောစကား ကောက်နှုတ်ချက်များ (၁) says:
January 30, 2012 at 9:30 AM Reply
မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းက နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် သူ(မ)၏ အင်းလျားကန်စောင်းရှိ အိမ်ဂေဟာတွင် တွေ့ဆုံခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့တွင် တောင်တန်းတစ်ဝက်၊ ပင်လယ်တစ်ဝက် အကြား၊ ရော်ဘာတောများ အကြား၊ ဆီအုန်းတောများ အကြားတွင် ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံနေပြီ ဖြစ်သည်။
ထားဝယ်ခရီးစဉ် အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောစကား ကောက်နှုတ်ချက်များ (၂) says:
January 30, 2012 at 9:31 AM Reply
" ထားဝယ်သူ၊ ထားဝယ်သားတွေက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ခံစားမှုကို ပိုနားလည်နိုင်မှာပါ "
(နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်၊ ထားဝယ် NLD ရုံး)
" ကျွန်မတို့ဟာ မှော်ဆရာလည်း မဟုတ်တော့ `ဥုံဖွ.. အားလုံးဖြစ်စေ´ ဆိုပြီး မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကတိပေးနိုင်တာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ပြည်သူတွေကို ဘယ်တော့မှညာမှာ မဟုတ်ဘူး "
" အစိုးရတိုင်းကို ပြည်သူတွေက ထိန်းထားနိုင်မှ တကယ့် ဒီမိုကရေစီ ရပြီလို့ ကျွန်မတို့ ပြောနိုင်မှာပါ "
January 31, 2012 at 2:40 PM Reply
အောက်တန်းစား ABSDF က ဆိုလို. လာမိတာမှားတယ်လို.တာင် ကိုယ်.ကိုယ်ကိုထင်မိပါတယ်
February 3, 2012 at 5:04 PM Reply
ကောင်းပါတယ် anonymous (January 31, 2012 2:40 PM) ရေ ဒီဘလော့ဂ်ကို နောက်ဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို လာသူတွေ အကုသိုလ်ရသွားတာကို မလိုချင်ဘူး။ မှတ်သားစရာ ရသွားတာကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကုသိုလ်လာရှာသူတွေ မလာတာ အကောင်းဆုံးပဲ။
February 10, 2012 at 3:28 PM Reply
Anonymous (January 31, 2012 2:40 PM) က
Anonymous (January 31, 2012 2:40 PM) နဲ့ေ၇းသွားတဲ့ mg (မောင်) ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ကကောင်...
အာဏာ၇ူးတစု၇ဲ့ မင်းမဲ့စ၇ိုက်ကို ၇ိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့၊ မှန်မှန်ကန်ကန်၇ှိတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေက ကန့်ကွက်နေကြတာပဲကွ။
( ABSDF အတွင်းရေးမှုးဟောင်း (၈၈) နှင့် ဥက္ကဌ ( ဟောင်း) တို့ ၏ မြောက်ပိုင်း လူသတ်မှု့များအပေါ်သဘောထာထား ) ) (Posted on 21-12-2011)
ပန်းချီထိန်လင်း ၇ဲ့ ဆောင်းပါး (ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ခဲ့စဉ်က..) (Posted on 19-12-2011)
မငယ်နိုင်တို့လို ဒီလူမဆန်အောင်နှိပ်စက်ပီးသတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စအတွက် လုံးဝတာဝန်မ၇ှိတဲ့ ABSDF အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေအားလုံးကို (( အောက်တန်းစား ABSDF )) ဆိုပီး ဝါးလုံး၇ှည်နဲ့ယမ်းပီး ပုတ်ခတ်စ၇ာမလိုဘူးကွ။
February 10, 2012 at 5:55 PM Reply
February 11, 2012 at 3:25 PM Reply
February 11, 2012 at 3:26 PM Reply
February 11, 2012 at 3:27 PM Reply
February 11, 2012 at 3:28 PM Reply
February 11, 2012 at 7:21 PM Reply